Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Wayaanaha Loogu Awood Sheegtay oo Gobolka Axmaarada Kadhacay.
Dagaal Wayaanaha Loogu Awood Sheegtay oo Gobolka Axmaarada Kadhacay.
Wararka naga soo gaadhaya Dagmada Odite ee Gobolka Gojam ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya in dagaal khasaare gaystay oo dhex maray ciidamada wayaanaha iyo kuwa jabhadaha wax iska caabinta ee Goboladaas ka dhaq dhaqaaqa.
Sida xogta aan kuhelayn Jabhada u dagaalanta xoraynta dhulka Axmaarada ee ADA ayaa weerar kuqaaday ciidamada wayaanaha ee saldhigoodu yahay Dagmada Odite, halkaas oo ciidanka gumaysiga khasaare balaadhan lagu gaadhsiiyay.
Afhayeen u hadlay Jabhada ADA ee kadagaalanta Gobolka Axmaarada ayaa sheegay in dagaalkii Odite kadhacay ay ciidankoodu ku gacan sareeyeen, wuxuuna afhayeenku xusay in ay lawareegeen hub iyo saanad ciidan oo kale.
Afhayeenka Jabhada ADA ayaa sidoo kale sheegay in ay sare uqaadayaan howl galada ay kawadaan Gobolka Axmaarada, kuwaas oo ladoonayo in lagu xoreeyo qoomiyada xabashida iyo dhukeediiba, wuxuuna afhayeenku sheegay in ay weerareen fadhiisimo badan oo ciidanka wayaanuhu ay lahaayeen.
Ciidamada wayaanaha ee Gobolka Axmaarada kusugan ayaa lasheegayaa in ay dareemeen culaysyo badan, kadib markii ay soobateen jabhadaha hubaysan ee kadagaalama dhulka Axmaarada, kuwaas oo ay ugu xoogbadan tahay Jabhada Ginbot 7 oo iyadu in badan dagaalka kusoo jirtay.
Dhinaca kale isku dhac ayaa laga soo sheegayaa xuduuda Canfarta iyo Tigreega, halkaas oo sida lasheegay ay isku fara saareen dadka shacabka ah ee Canfarta iyo ciidanka Agaziga, waxaana lasheegayaa in tiro ciidanka gumaysiga ah ladilay.